Nwata na-egbu egbu nwa ahụ
Imepụta ime ụlọ
Ahụ ike ụmụ nwanyị
Nri oriri kwesịrị ekwesị
Mma nke nwanyị
Ngosiputa Ngwa na perfumery
Ịkpụ aka na ịkpụ ụkwụ
Ihe omume ntụrụndụ
Psychology na mmepe
Ndụ onwe onye
Ụmụaka Ahụike ụmụaka
N'oge okpomọkụ bụ, ma eleghị anya, otu n'ime oge kachasị njọ maka nne nke ụmụntakịrị. N'ihi na ọ na-ezobe onwe ya ọtụtụ, na elele anya mbụ, egwu na-enweghị isi maka ahụike nke nwa ahụ. Nke a abụghị nanị traumatism, nke na-agụnye ikpere ụkwụ ma ọ bụ nkedo. Otu n'ime ọ bụghị naanị ihe na-adọrọ mmasị, ma ọbụna ọnọdụ dị ize ndụ bụ mgbe osisi na-egbu egbu merụrụ nwatakịrị. O yiri ka ọ na-egwu egwu n'ehi ahihia - mgbe ahụ, ọ na-akwa ákwá. Gịnị mere na olee otu ị ga - esi enyere ya aka?
Nke mbụ, rịba ama ozugbo na mgbe nwatakịrị na-egbu ya site na osisi na-egbu egbu - ọ pụtaghị na ọ na-eri akwukwo nke ọ na - amasị - na osisi na - egbu egbu nke na - egbu egbu. O nwere ike ịbụ na-esote osisi nke na-emepụta ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu, nke dị mfe imetụ aka, iji nweta ihe ọjọọ.
Nke mbụ, ka anyị tụlee nhọrọ ahụ, mgbe nwa ahụ adịghị etinye ya n'ime ya, ma nweta ọnya ekpenta site na ịkpọtụrụ osisi na-egbu egbu. E nwere ole na ole nrịta anya nke ọma na okwu ndị na-eduga ná njedebe na mmeri nke osisi na-egbu egbu ka dị, mkpu ákwá nwata ahụ adịghịkwa efu. Karịsịa, ebe ahụ mebiri emebi gbanwere ngwa ngwa na-acha uhie uhie, mmụkpọ anụ ahụ na-apụta, akpụkpọ ahụ na-egbu egbu, na ọnyá na-adighi mma.
Kedu ka anyị nwere ike isi nyere aka, gịnị bụ enyemaka mbu maka mmebi ahụ na osisi na-egbu egbu? Iji malite, dọpụ nwa ahụ n'ọhịa, nke kpatara ọnya ekpenta ahụ. Ọ bụrụ na ihe ọṅụṅụ nke osisi na-egbu egbu na-adịgide n'elu uwe nwa (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ sitere na ahihia, ebe ị na-amaghị, ma ị nwere ike ikwu na tupu nwatakịrị ahụ arịgoo n'ọhịa, ọ bụghị), wepụ ihe ndị a niile. Ọ bụrụ na ihe niile a emeghị ihe karịrị otu elekere gara aga - mgbe ahụ, e nwere ihe mere ị ga-eji kpochapụ mpaghara ahụ metụtara (akụkụ metụtara) ma ọ bụ mmiri na-agba agba, ma ọ bụ mmiri ọkụ na-eji ncha, ma ọ bụrụ na o kwere mee. Mgbe nke a gasịrị, ọ dị mkpa iji belata ebe ahụ, nke ihe ọṅụṅụ nsị ahụ nwetara. Ị nwere ike jiri nwayọọ hichaa ebe a na akwa akwa ma ọ bụ akwa akwa, ma ọ bụ jiri nwayọọ hichaa ya, na-agbalị ka ị ghara imerụ nwatakịrị ahụ. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ọkachamara na-ahụ maka nrịanrịa pụrụ iche na njem ị na-aga ma ọ bụ ụlọ ọgwụ gị, nke ịkwesịrị iji tee anụ ahụ metụrụ n'ahụ. Ọ bụrụ na anaghị adị adị, adịla umengwụ ka ị gaa ahịa ọgwụ na ịzụta. Ọ bụrụ na ọnya ahụ emeela ka mmeghachi omume dị njọ nke ahụ, nnukwu ọnyá pụtara, ebe ahụ emetụtakwara, ọ dị mkpa inye nwata ahụ abụghị mpaghara, kama ọ bụ ọgwụgwọ zuru oke megide mmeghachi omume nke nrịanrịa.
Ugbu a, ka anyị gaa na ọnọdụ dị ize ndụ - nke osisi na-adaba n'ime ya. Ikekwe ọ mere n'ihi na ị naghị esochi akwụkwọ ahụ, ọ hụkwara beri mara mma, kpebiri na a ga-eri ya. Ma ọ bụ ị kpebiri ilekọta mkpuru akwụkwọ, nzube nke ị na-amaghị. N'ọnọdụ ọ bụla, ọnọdụ dị otú a na-enye nnukwu nsogbu, ọ bụghị naanị n'ihi ahụ ike - maka ndụ nwatakịrị!
Ịgụ na enyemaka symptomatology ọ bụrụ na nsị site na osisi nsị adịghị uru ya, n'ihi na mgbaàmà ahụ anaghị adị n'otu mgbe niile. Ozokwa, ha nwere ike ịbụ ndị dị iche iche n'ụzọ doro anya, n'ihi na ha na-adabere kpọmkwem na akụkụ ahụ, usoro usoro nwatakịrị ahụ kachasị emetụta site na nsị na otu toxin.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị jiri anya gị hụ ihe nwatakịrị ahụ riri - ị maghị otú osisi a na-egbu egbu si arụ ọrụ. Ya mere, anyị hụrụ na e nwere ihe na-enyo enyo n'ọnụ nwa - ozugbo na-amalite inye enyemaka mbụ, echela ka ọdịdị nke ahụ dị. Ọ bụrụ na ị hụbeghị nke a, ma hụ mgbanwe ọ bụla n'ọnọdụ ọnọdụ nwatakịrị - dịka ọmụmaatụ, o nwere mkpesa banyere ahụ ike ya, ma ọ bụ ihe mmeghachi omume ndị ọzọ - ozugbo buru ihe kachasị njọ, buru nwa ahụ gaa n'ụlọọgwụ (ma ọ bụ kpọọ ndị dọkịta n'ụlọ ).
Mgbe ị ruru "enyemaka mbụ", gaa n'ihu enyemaka. Akpa, nyochaa onu ogugu ndi ozo - ikekwe, a ka nwere ihe ozo nke osisi na-egbu egbu n'ime ya - mgbe ahu i kwesiri igbalie ike inweta ihe nile. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ amaghị ihe ọ bụla, na nsị ahụ emeela ihe na-erughị ọkara elekere elekere gara aga - mgbe ahụ gbalịa ịme agbọ agbọ ka ọ bụrụ na ihe ndị ahụ ekpofuworo. Iji mee nke a, gbalịa itinye mkpịsị aka abụọ n'ime ọnụ nwa ahụ, wee mee ka ha dị ntakịrị - nke a na - ebute vomiting na vomiting ozugbo.
Mgbe nwatakịrị ahụ na-agbapụta ihe niile nwere ike, ọ dị mkpa iji nye ya ezigbo ego nke carbon. Usoro nke ịkọ ụdọ a chọrọ iji mee ka nsị dị njọ bụ otu ihe ahụ: kwa kilogram nke arọ nwatakịrị, otu gram nke carbon ga-arụ ọrụ kwesịrị iwere.
Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ na-eti mkpu, na-agbaji ma ị pụghị ime ka ọ dị jụụ, iji mee ka ọkpụkpụ dị mkpa iji mee ka ọ gbanwee ya - ma ka na-enye ya ụfụ ọkụ, na-aṅụrịrị ma ọ bụ mmiri ara ehi ma ọ bụ tii.
Ọ bụrụ na ị hụrụ ihe nwa gị riri, ọ bụrụ na ị nwere ike ịkwa akwa ma debe mkpụrụ osisi ndị a ma ọ bụ doo tupu ndị dọkịta abịa - mee ya, ma gosi ndị dọkịta ihe kpatara nsị. Nke a ga - enyere ha aka ịchọta ihe ha kwesịrị ime, na site n'akụkụ dị aṅaa ka a ga - atụ anya ihe ize ndụ ahụ (ma ọ bụ, ma eleghị anya, ọ dị adịghị, osisi ahụ dịkwa ezigbo njọ).
Cheta na n'ọnọdụ niile, ọ ka mma ịtụ anya na igbochi ọdachi na-abịanụ karịa ịkọwa nsogbu ọjọọ ndị dị ize ndụ. Ọ bụ ya mere anyị ji atụ aro na ị na-echeta ihe mgbochi ole na ole, site na ịchọta nke ị nwere ike belata ohere nke ọnọdụ dị ize ndụ na efu.
1. Ụmụaka ekwesịghị ịnakọta osisi n'onwe ha, na-enweghị nlekọta ndị okenye.
2. Debe ihe dị ọcha na osisi ndị na-amaghị, na-emeso nwa gị ihe dị ka ihe ize ndụ.
3. Ejila nri ndị osisi ahụ ị hụrụ maka oge mbụ n'ime ndụ gị.
4. Ụmụntakịrị kwesịrị ịma na osisi anaghị eri nri, na ị ga-ewere ihe ị na-enye ndị mụrụ gị (otu mkpụrụ osisi ahụ, dịka ọmụmaatụ).
5. Ma eleghị anya ị maara na ọtụtụ n'ime ụlọ ime ụlọ na-egbu egbu. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ọ bụla banyere "anu ulo" gị, gbalịa ịmụta ma hichaa osisi dị ize ndụ. Nke a na-emetụta ezinụlọ nwere ụmụaka dị n'okpuru afọ ise.
6. Echela na ọ bụrụ na e mepụtara ọgwụ na-adabere na osisi, mgbe ahụ, ọ dị ezigbo mma. Ịgba ọgwụ na-emebiga ihe ókè karịrị nke ahụ pụkwara ịkpata nsị!
Nnukwu ngwa ngwa na ụmụ
Nne na-elekọta ụmụaka
Mmetụta nke ekwentị mkpanaaka na ahụ ike nke ụmụ
Protein na mmamịrị nke nwa
Echeta maka ụmụaka: otu esi eme omume n'ụsọ osimiri
Kedu ihe ị ga-eji amụ nwa?
Nwa ya na nne ya na-ehi ụra
Tartlets na jam na marshmallow ude
Anna Kalashnikova jọrọ banyere ịtụrụ ime nke atọ site na Alexei Panin, vidiyo
Esi merie obi abụọ
Kasị mma Nne na aka: BB Cream
Ihe na nkwonkwo nke ntolite ntutu isi
Achicha na sọrel
Ịzụlite ikike nke onye nwatakịrị
Ọkpụkpụ Na-ahụ Maka Ọrịa Cancer
Agwa na oven oven
Nri na ihe oriri na-atọ ụtọ ma na-egbuke egbuke, usoro nchịkọta dị ụtọ maka February 23
Hot sandwiches na mozzarella
Mba ọzọ si Ukraine
Ngwongwo Ụlọ Ụlọ
Nchegbu kachasị mma site na nchegbu na nchegbu na-emenye ụjọ bụ ịhịa aka n'ahụ
Na-eto ma na-elekọta mkpụrụ fig
Ofe na ndi egwu
Nri ofe na poteto na zukini
© 2021 ig.inditics.com